William – Page2– AsiaApps
ကင်မရာ ၁၆ လုံးနဲ့မြင်တွေ့ရမယ့် LG စမတ်ဖုန်း 🤨)
November 26, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ကင်မရာ ၁၆ လုံးနဲ့မြင်တွေ့ရမယ့် LG စမတ်ဖုန်း 🤨)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းလေးတွေမှာဆိုရင် Back camera တစ်ခုလုံးတည်းသာရှိခဲ့ပြီး ကင်မရာပါတယ်ဆိုရုံလောက်ပဲ စမတ်ဖုန်း ဖန်တီးသူတွေက တပ်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ Front camera ဆိုပြီးဖုန်းအရှေ့မျက်နှာပြင်မှာ Selfie ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ကင်မရာနှစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ …
Huawei ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်း specification အချို့နဲ့ release date ထွက်ရှိလာပြီ
November 20, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Huawei ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်း specification အချို့နဲ့ release date ထွက်ရှိလာပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ အစောပိုင်းလောက်က Infinity Flex display နဲ့ Samsung ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်း အမျိုးအစားကို Samsung Developer Conference 2018 မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်သလို အခုဆိုရင် Huawei ရဲ့…
Android9Pie ကတော့ google ကဖန်တီးထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် OS (Operating System) Software update တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအစောပိုင်းလောက်ကမှ ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Software update အသစ်မှာဆိုရင် ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ပေးမယ့်…
တရုတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ Xiaomi ဟာတော့ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Mid-range စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစား Redmi Note6ကိုပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလတုန်းက ထိုင်းမှာစတင်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုလာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့မှာ မိတ်ဆက်ဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Specifications…
Galaxy S9 အတွက် Ice Blue color option အသစ်တစ်မျိုးကိုချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung
November 14, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S9 အတွက် Ice Blue color option အသစ်တစ်မျိုးကိုချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung
Samsung ဟာတော့ သူ့ရဲ့ Galaxy S9/ S9+ အတွက် Ice Blue ဆိုတဲ့ color option အသစ်တစ်မျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ချပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ချပြလိုက်တဲ့ Ice Blue color ဟာကျွန်တော်တို့အရင်က Samsung…
Samsung ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်းအတွက် concept video ထွက်ရှိလာပြီ
November 13, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Samsung ရဲ့ Foldable စမတ်ဖုန်းအတွက် concept video ထွက်ရှိလာပြီ
Samsung ဟာတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဉီးဆုံး Foldable စမတ်ဖုန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တုန်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ Samsung Developer Conference 2018 မှာ Infinity Flex display နဲ့အတူမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖုန်းအမည်ကတော့…
Samsung ရဲ့ Infinity display အသစ်ကို Galaxy S10 မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့အလားလာရှိ : Infinity-O display!
November 12, 2018 November 12, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Samsung ရဲ့ Infinity display အသစ်ကို Galaxy S10 မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့အလားလာရှိ : Infinity-O display!
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ Samsung Developer conference 2018 မှာ Samsung ဟာ Infinity V, Infinity O အစရှိတဲ့ Notch display နှစ်မျိုး၊ Infinity Flex…